Ikhaya Lomndeni Elihle Elihlanzwe Ngobuchwepheshe futhi Elicashile - I-Airbnb
Ikhaya Lomndeni Elihle Elihlanzwe Ngobuchwepheshe futhi Elicashile
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Michelle
Ngena futhi wamukele isitayela somklamo wangaphakathi waleli khaya. Le ndawo yokuhlala ikhombisa ukhuni olumnyama kanye nemishayo yokhuni yezakhiwo, inhlanganisela ye-rustic ne-chic aesthetics. Inepulani yaphansi evulekile enezindawo ezimbili zokuhlala ezinkulu ezigxile ekhishini elinendawo yokudlela yasekuseni.
Indawo yangaphandle ine-grill ye-BBQ kanye nomgodi womlilo onezindawo eziningi zokuhlala kanye nokudla kwangaphandle. Ezinganeni kukhona isethi yokujiya kanye nebhokisi lesihlabathi. Umndeni unobungane kakhulu.
Kunamagumbi okulala amathathu amakhulu. Amaqembu angaphezu kwesithupha anomatilasi bomoya abangamawele angu-2 noyedwa wendlovukazi abatholakalayo kanye nosofa abakhulu abayingxenye abangu-2.
Indawo yangaphandle ine-grill ye-BBQ kanye nomgodi womlilo onezindawo eziningi zokuhlala kanye…
I-fireplace esendlini, I-TV, umbhede we-queen
I-TV, umbhede oyidabuli
Okokuvikela indawo yomlilo
4.86 (izibuyekezo ezingu-285)
Indawo ibekwe endaweni ethulile, enobungane. Itholakala phakathi kwemizuzu eyi-10 yawo wonke uthelawayeka omkhulu, imizuzu emi-5 ukuya esikhumulweni sezindiza, imizuzu eyi-15 ukuya edolobheni, kanye nemizuzu engama-20 kuphela ukuya eCleveland Clinic.
IBerea inamachibi amabili. I-Coe Lake inikeza inkundla yokudlala enkulu esanda kunwetshwa, inkundla yemidlalo yaseshashalazini, izindlela zokuhamba, ichibi lomphakathi, kanye nenkundla yokudlala enama-grill. Ngaphansi komgwaqo i-Wallace Lake inendawo yolwandle kanye nempophoma enemizila yebhayisikili.
Kukhona nezindawo zokudlela ezinhle eziphethwe endaweni.
Ibanga ukusuka e- Cleveland Hopkins International Airport